Soo -saareyaasha caagga siligga HTV - Shiinaha HTV Warshadda caagga ah ee Silicon & Alaab -qeybiyeyaasha
Fasalka Cuntada Silicone Rubber Qalab Ceyriin ah
Hordhaca alaabta FUSHITE caag silikoon ah waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxaa lagu daaweeyaa heerkul sare. Tilmaamaha muhiimka ah daahfurnaanta sare, Awoodda sare, habsocod aad u fiican ayaa ka gudbaya ROHS, REACH, Araajida LFGB 1. Dhammaan noocyada kala duwan ee waxyaabaha nool iyo qalabka jikada sida caaryada keega, buraashka iyo barkinta. 2. Noocyada kala duwan ee shaabadaha iyo barkimooyinka sida dhalada biyaha, giraanta shaabadda, giraanta O. 3. Xadhkaha korontada ee caadiga ah iyo alaabta fiilada. 4. ...
HTV Silicone Rubber Medical Grade Medical Fasalka iyo Extrusion Nooca Raashinka
Hordhaca alaabta FUSHITE caag silikoon ah waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxaa lagu daaweeyaa heerkul sare. Maxaad u dooratay caagaga silikooniga ah ee qaaliga ah Waxaan u isticmaalnay silicayada qaaliga ah ee FST-430 sidii buuxiyaha caagga silikoon. Sida laga yaabo inaad ogaato silicayada la qiijiyay ayaa ah faa'iidadeena weyn, taas oo beddeli karta Aerosil. Our FST-430 ma aha oo kaliya muujinta daahfurnaanta aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay muujin kartaa sifooyin farsamo oo aad u fiican. Vulcan ...
Daahfurnaanta sare ee waxqabadka sare ee caag silikoon
Hordhaca alaabta FUSHITE caag silikoon ah waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxaa lagu daaweeyaa heerkul sare. Tilmaamo Muhiim ah Waxay leedahay extrudability wanaagsan, hufnaan sare iyo iska caabin huruud ah, oo dusha siman ee alaabta silicone extruded. Habka Vulcanization Waxaa lagu daaweyn karaa peroxide iyo sidoo kale platinum. Haddii lagu daaweeyo platinum, waxay muujin doontaa hufnaanta sare iyo guryaha farsamada sare. Alaabta ...
Platinum HTV Silicon Rubber oo loogu talagalay Xargaha Silicone LED
Hordhaca alaabta FUSHITE caag silikoon ah waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxaa lagu daaweeyaa heerkul sare. Astaamaha Muhiimka ah Daah -furnaanta Sare Habka wax -qabad aad u fiican Way fududahay in la dejiyo oo laga gudbo shahaadada ROHS, REACH iyo FDA. Habka Vulcanization Waxaa lagu daaweyn karaa peroxide ama platinum. Maaddada isku darka faa'iidooyinka caag silikoon ujeeddo guud leh kuwa lagu daray-daaweyn caag silicone dareere, magac ...
Hordhac Badeecad Kala duwanaanta adayga ee maaddadu waa 15-80 Shore A, oo leh iska caabin aad u fiican oo heerkulka sare iyo hooseeya (laga bilaabo -50 ℃ ilaa +250 ℃), iska caabin cimilada, waxqabadka korantada, iwm. iyo qalabka korontada, oo ku habboon dhammaan noocyada keyboard-ka, noocyadiisa kala duwan, siligga korantada & fiilada, tuubbada, O-ring-ka guud, gaskets, shaabadaha, iwm.
Kuleyl hufan oo hufan oo dabiici ah HTV silikoon silikoon ah
Hordhaca alaabta FUSHITE caag silikoon ah waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxaa lagu daaweeyaa heerkul sare. Si weyn loogu isticmaalo qalabka elektarooniga, qalabka guryaha, sahayda caafimaadka, alaabta ilmaha dhallaanka ah, nalalka LED-ka, baabuurta tamarta cusub iyo warshadaha kale. Dhammaantood waa caag silikoon ah oo darajaysan. Waxaa laga baaraandegi karaa b ...
Hordhaca alaabta FUSHITE caag silikoon ah waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxay ku bogsataa heerkulka sare. Elastomers -ka silikoonku waxay dabacsan yihiin heerkul hoose waxayna u adkaysan karaan kulaylka iyo gabowga (shucaaca UV iyo ozone). Maaddaduna way fududahay in la hawlgeliyo oo waxay leeyihiin sifooyin farsamo oo wanaagsan oo aan iska beddelin heerkulka ballaaran. Waxay leeyihiin dhadhan dhexdhexaad ah oo bayooloji ahaan aan firfircoonayn. Waxaa loo adeegsaday warshado badan ...
FST Silica Fumed Silicone caag Cuntada Heerka HTV Silikoon
Hordhaca Badeecadda Kala-duwanaanta ad-adayga ee taxanahan waa 15-80A, oo leh kuleyl u adkaysta, hufan, habsocod wanaagsan, demolding fudud iyo xoog jeexitaan iwm alaabooyinka guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo gacmo ilaalin iyo sidoo kale qaybo elektaroonik ah, codsiyada xiriirka cuntada, qaybaha baabuurta , rullalulaha, qaybaha qalabka guriga iyo alaabta kale. Maxaad u dooratay caagaga silikooniga ah ee qaaliga ah Waxaan u isticmaalnay silicayada qaaliga ah ee FST-430 sidii buuxiyaha caagga silikoon. Sidaad u ogtahay silicayaga qiiqa leh waa kan ...
Tayo sare oo hufan oo tayo sare leh HTV silikoon caag ah oo ceeriin ah Daawooyinka
Taxanaha FST Fumed Silicone Rubber Raw Material
Horudhaca alaabta Fushite waxay bixisaa laba nooc oo caag silikoon ah oo adag: FST-80 taxane iyo FST-70 taxane. Dhammaantood waa caag silikoon ah oo darajaysan. Waxaa lagu baaraandegi karaa hababka caadiga ah, sida soo -saaridda, cadaadinta iyo wax -ka -beddelka wareejinta, ama wax -ka -duridda duritaanka. Waxay ku daaweeyaan kuleylka waxayna ku habboon yihiin soo saaridda alaabooyin kala duwan oo caag ah oo silikoon ah. Badeecadaha taxanaha FST-80 waxay leeyihiin heerka ugu sarreeya ee daahfurnaanta, sifooyinka jirka oo aad u fiican & iska caabin huruud ah iyo pr wanaagsan ...
Silicon Rubber HTV Fumed HCR Solic Silicone Rubber Raw
Hordhaca alaabta FUSHITE caag silikoon ah waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxaa lagu daaweeyaa heerkul sare. Maxaad u dooratay caagaga silikooniga ah ee qaaliga ah Waxaan u isticmaalnay silicayada qaaliga ah ee FST-430 sidii buuxiyaha caagga silikoon. Sida laga yaabo inaad ogaato silicayada la qiijiyay ayaa ah faa'iidadeena weyn, taas oo beddeli karta Aerosil. Our FST-430 ma aha oo kaliya muujinta daahfurnaanta aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay muujin kartaa sifooyin farsamo oo aad u fiican. Our Se ...
Hordhaca alaabta FUSHITE caag silikoon ah waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxaa lagu daaweeyaa heerkul sare. Maxaad u dooratay caagaga silikooniga ah ee qaaliga ah Waxaan u isticmaalnay silicayada qaaliga ah ee FST-430 sidii buuxiyaha caagga silikoon. Sida laga yaabo inaad ogaato silicayada la qiijiyay ayaa ah faa'iidadeena weyn, taas oo beddeli karta Aerosil. Our FST-430 ma aha oo kaliya muujinta daahfurnaanta aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay muujin kartaa sifooyin farsamo oo aad u fiican. Furaha F ...